Togaf Certification - Umhlahlandlela ophelele
Umhlahlandlela ophelele we-Togaf Certification
I-TOGAF isala i-Open Group Architecture Framework. Luhlaka lokwakha ubuchwepheshe olunikeza indlela yokubhekana nokuklama, ukuhlela, ukusebenzisa nokulawula ukwakheka kobuchwepheshe benkampani yolwazi.
Ubani onika iSitifiketi?
Kuxhomeke kuMnyango Wezokuvikela we-United States eMelika waseMelika America (TAFIM) futhi wakhiqizwa yi-Open Group. Iqembu Elivulekile lingumthengisi kanye nobuchwepheshe obungenabulungiswa embonini yezinkampani ezihlanganisa izinhlangano ezingaphezu kwamakhulu amahlanu futhi yilona nhlangano eyinhloko yokuhlanza uhlolo.
Iyini iphuzu le-TOGAF?
Iphuzu lesimiso se-TOGAF eliqinisekisa abasebenzi ukuthi kuthuthukiswe umkhiqizo jikelele webhizinisi ngokuvuma indlela engavamile yokubhekana necebo. Ngokuyinhloko, le nkambo ihloselwe umncintiswano efuna ukuba isazi se-Enterprise Architect. A Isiqinisekiso se-TOGAF Kuyinto engaqondakali ukubeka isitembu isitembu
● ukuqinisekisa abalingani ukuthi izindinganiso ezibalulekile zokuhlelwa kohlaka zifakwe
● Amakhono okuhlaziya asetshenzisiwe futhi angaxhunyaniswa ngokuphumelelayo nesakhiwo sokuklama amabhizinisi.
Kuphi inhlangano kungaba TOGAF kusetshenziswe?
Njengoba i-TOGAF ihlanganisa indlela engavamile yokubhekana nepulani, iboniswa njalo kumazinga we-4 ezindawo ezihlanganisiwe zebhizinisi, ukuze kube yiBhizinisi, Isicelo, Idatha kanye neTheknoloji.
I-Business Architecture - Yilokho into ehlukanisa inqubo yebhizinisi, ukuphathwa, inhlangano kanye nezinqubo zebhizinisi eziyinhloko zenhlangano
I-Architecture yesicelo - Lokho okunikeza umdwebo ngamunye kumakhemikhali athile okumele uthunyelwe, ukuxhumana phakathi kohlaka lwezicelo kanye nobudlelwane babo obujule kakhulu amabhizinisi
I-Data Architecture - Lokho okuveza isakhiwo semithombo yenhlangano esemthethweni nenyama ngokomzimba kanye nempahla yabo yokuphatha.
Izakhiwo zobuchwepheshe - Imishini, izinhlelo nezinhlaka zenethiwekhi ezidingekayo ekusebenziseni isimiso
Ubani ofanelekayo ukukhombisa ukuthi uyini I-TOGAF Certification
Ayikho imigomo yokufaneleka yokuthola isitifiketi se-TOGAF 9.1. Kunoma yikuphi, umfakisicelo udinga ukususa izivivinyo zenhlangano elayisensi ukuba avule ngokucacile i-Enterprise Architect.
Nguyiphi inombolo yeZinga leziMviwo okufanele zisuswe?
Umncintiswano onomona nge-TOGAF 9.1 kudingeka ukuba asuse izivivinyo ezimbili, i-Level 1 ye-TOGAF Foundation course kanye ne-Level 2 ye-TOGAF 9.1 isitifiketi. Ukuhlelwa kokuhlelwa kokugxila kwabo kuzogqugquzelwa kakhulu ukusula iNqanaba elilodwa ngesikhathi esisodwa. Kunoma yikuphi, ukusekela izisekelo kuye kwachaza izifundo zabo ezifana nomncintiswano ongakwazi ukuzindla ngakho, futhi asule kokubili lezi Zinga ngokuhamba. Isikhathi sokulungiselela kanye nokusungulwa kuyisimiso sezinsuku ze-4 nokuzihlola ngokwakho ngamaviki e-2
Yiziphi izimpawu ezidingekayo zokususa i-Examination?
Ukuhlukaniswa okulungile kwezimpendulo -
I-1. Level One noma Level Foundation - Inani lokudlula elidingekayo yi-55% okuyinto i-22 ephuma kakhulu kakhulu kwe-40. Lezi yizo zonke izinqumo ezihlukahlukene zokuthintana nophenyo ngalunye oluhambisa isitembu esisodwa.
I-2. Izinga ezimbili noma izinga eliqinisekisiwe - Inani lokudlula elidingekayo yi-60% okuyinto i-24 ephuma kakhulu kakhulu kwe-40. Lezi yizo zonke izinqumo ezihlukahlukene zemibuzo kanye nophenyo olulodwa oluhambisa isitembu esisodwa.
I-3. I-Level One ne-TOGAF 9.1 emibili ehlanganisiwe - Ukuhlolwa kuqukethe izingxenye ezimbili. Isigaba esisodwa sifana nephepha le-Level One elichazwe ngenhla futhi isigaba sesibili sifana nephepha leZinga ezimbili elikhulunywe ngenhla, kodwa uma kwenzeka ukuthi amabhomu e-teste noma iyiphi ingxenye eyodwa kumele aphinde athathe leyo ndawo yokuhlolwa futhi. Umthengisi weCroaching Training Course kuphela okwazi ukuvumela umqhudelwano ukuba asuse amazinga amabili ngenye indlela.
Amazinga amabili kumele asulwe ukuze kungenzeka anikezwe I-Togaf ye-9.1 certificaiton.
I-Hole phakathi kwemizamo emibili - Kumele kube khona umgodi wenyanga eyodwa phakathi kwemizamo efihliwe. Isibonelo, uma umfakisicelo ephakamisa ukuhlolwa ku-25th June, i-2017, isikhathi sokubamba kuze kufike ngo-XNUM ngo-Juni, i-27 kumele ibambelele. Noma yikuphi ukuhlolwa okwenziwe ngaphambi kwalokho ngeke kucatshangelwe.
Kuphi ukuhlolwa okwenzekayo?
Izivivinyo zenzeka ku-Pearson VUE zigxile esizweni futhi zihlolwe ukuhlola incwadi, lapho i-teste ivunyelwe ukukhetha ithebhu "yokubhekisela" phakathi kokuhlolwa kwesikrini sePC ukuze kusetshenziswe ngokusebenzisa le ncwadi bese ikhuluma ngokubheka. Okunye okunye ukunikeza ukuhlolwa kwe-intanethi. Iningi elikhombisa ukugxila lizogqugquzela ukuhlolwa kwe-intanethi, futhi ngokuqinisekileyo kuzokulungiselela ukuphela kokuhlolwa konyaka ngenye indlela ehlehlisayo njengoba isici sesakhiwo sabo.
Yiziphi izinhloso ezibalulekile zokuthinta a I-TOGAF Certification course
Kusukela I-TOGAF Certification Course sekuphuthumayo ukuthuthukisa amakhono amakhono emisebenzi yokwakha ibhizinisi, isakhiwo senkambo sihlanganisa kakhulu:
Indlela Yokuthuthukiswa Kwezakhiwo Ngesigaba Esihlukene
I-Framework Content Framework
I-Enterprise Continuum namathuluzi
Ukuhlukaniswa kwe-Architecture, Ukubusa, Izimiso nokunye.
Phakathi naleso sikhathi, umncintiswano uzokwenza lokhu:
Thola ukhululekile ngeSigaba sokuQala kanye nakwezinye izindlela zokuhlela ukuhamba
Qonda isakhiwo sokuqukethwe se-Architecture, i-Metamodel eceleni kwe-Governance.
Ukuqaliswa kwezinhlelo zokusiza ezakhiweni kanye nokuqonda izimo zebhizinisi,
Qonda i-ADM, ukuphathwa kwayo okudingekayo kanye nokulungiswa okuhlukile kwe-ADM
Qondanisa Amamodeli Okuvuthwa Nezikhwama ze-Business Architecture
Iyini izindleko zamanje zokulungiselela isitifiketi se-TOGAF 9.1?
I-in-class ibheka kokubili izifundo - I-Foundation ne-Certified ndawonye izobiza cishe nge-INR 75,000. Ngaphandle kwezindleko, kubalulekile ukuhlola isisekelo sokulungiselela kanye nohlaka lwaso ngaphambi kokuphetha.
Yiziphi amathemba esikhathini esizayo emva kokuphela kohlelo lwe-TOGAF 9.1 isitifiketi
Njengoba umfakisicelo eyokwakha ukuqonda okujulile kwendawo yokwakha ibhizinisi, amathemba esizayo ahlanganisa:
Ukukhishwa njengomhleli webhizinisi we-MNCs, nemikhiqizo phezu kwezwe. Namuhla, ayikho inhlangano, evulekile noma eyimfihlo engasebenza ngaphandle kokwakha ibhizinisi elinamandla
Sebenza njengochwepheshe udweba isinxephezelo esikhulu sokuhlukanisa, ukuhlela kanye nokwenza izinhlaka zomklamo ngaphakathi kwebhizinisi
Isitifiketi se-TOGAF 9.1 kuyimpawu zomhlaba wonke zomthamo wokudlulisela ngokuphumelelayo izingxenye nezibopho mayelana nokuhlukanisa, ukuhlola nokusebenzisa izinhlaka ezifanele zebhizinisi. Namuhla, yonke inhlangano, eya ekuthuthukiseni nasekuthuthukisweni, idinga abalingisi bebhizinisi ngokukwazi ukuqonda, ukuphuka futhi ngemuva kwalokho benze izimpendulo ezifanele ekufezeni imisebenzi.
Kungani i-TOGAF Framework isetshenziselwa ukuhlanganisa IT & Ibhizinisi
Izizathu ze-10 zokuthola i-TOGAF Training & Certification